ESI EHICHAPỤ FOTO SITE NA IPHONE SITE NA AYTYUNS - ITUNES - 2019
Inwe ike ịmepụta ọtụtụ akụkọ na PC bụ ihe bara uru. N'ihi oru a, otu onye nwere ike iji otu onye n'otu oge. Windows 10, yana sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ, na-enye gị ohere ịmepụta ọtụtụ ihe ndekọ ndị dị otú ahụ ma jiri ha na-arụsi ọrụ ike. Ma mgbanwe na interface nke os ọhụrụ osiri mgbagwoju anya ndi ozo novice, dika uzo nputa nke ihe omuma a gbanwere ebe ozo tụnyere uzo di iche iche nke Windows ma nweta uzo ohuru.
Usoro nkwụsị akwụkwọ
Ịhapụ akaụntụ dị ugbu a na Windows 10 dị nnọọ mfe ma usoro dum agaghị ewe ihe karịrị sekọnd ole na ole. Ma maka ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ bụ ndị maara PC, ha nwere ike iyi ka ezigbo nsogbu. Ya mere, ka anyị lebakwuo anya na esi eme nke a site n'iji ngwaọrụ ndị e ji rụọ ọrụ OS.
Jiri aka ekpe pịa ihe ahụ "Malite".
Na menu n'akụkụ aka ekpe, pịa akara ngosi ahụ n'ụdị nke onye ọrụ.
Ọzọ, họrọ "Ọpụpụ".
Rịba ama: Iji pụọ na akaụntụ, ị nwere ike iji ụzọ mkpirisi: dị pịa "CTRL ALT DEL" ma họrọ ihe "Akara" na ihuenyo nke na-apụta n'ihu gị.
Right pịa na ihe "Malite".
Ọzọ, pịa ihe ahụ "Kwụsị ma ọ bụ pụta"na mgbe ahụ "Ọpụpụ".
Site na usoro ndị a dị mgbagwoju anya, ịnwere ike ịhapụ akaụntụ Windows 10 Os wee banye ọzọ. N'ụzọ doro anya, ịmara iwu ndị a, ị nwere ike ime ngwa ngwa n'etiti ndị ọrụ nke sistemụ arụmọrụ.